Jack Grealish oo ku garaacay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo tirakoob xiiso badan – Gool FM
(England) 01 Dis 2021. Xiddiga Aston Villa ee Jack Grealish ayaa sii watay qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah ee Premier League isaga oo dhaliyay gool kulankii ay la ciyaareen kooxda West Ham United, inkastoo kooxdiisa looga adkaaday 2-1, ciyaar qeyb ka ahayd kulamada horyaalka.
Goolkan uu ka dhaliyay Jack Grealish kooxda West Ham United ayaa sare u qaaday ka qeyb qaadashadiisa goolasha ay dhalisay Aston Villa xilli ciyaareedkan waana goolkii 10-aad.
Jack Grealish ayaa ilaa iyo haatan dhaliyay 5 gool, wuxuuna sidoo kale caawiyay 5 gool kale, 9 kulan uu ka soo muuqday safka kooxdiisa Aston Villa xilli ciyaareedkan.
Xiddigan oo dhaliyay 10 gool oo kooxdiisa ah ayaa ku jira booska saddexaad, waxaana kaliya kaga horeeya tirakoobkan, xiddigaha kooxda Tottenham Hotspur ee Harry Kane oo 16 gool ah, iyo wiilka tayada leh reer Korea ee Son Heung-min oo 11 gool ah.
Marka la isbar-bardhigo rikoodhka Jack Grealish iyo xiddigaha kubadda cagta ee Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo, waxaan ogaaneynaa in xiddiga reer England uu iyaga ka sarreeyo ilaa iyo haatan, madaama Ronaldo uu dhaliyay 5 kulan oo uu la ciyaaray Juventus 8 gool oo horyaalka Serie A ah, laakiin weli wax gool ah ma uusan caawin.
Marka laga hadlayo Lionel Messi, oo aan ku nooleyn mid ka mid ah xilli ciyaareedyadiisii ugu fiicnaa ee kooxda Barcelona, wuxuu ka qeyb qaatay 9 kulan horyaalka La Liga oo xilli ciyaareedkan ah, wuxuu dhaliyay 4 gool, wuxuuna caawiyay 2 gool kale.
Muxuu ka yiri tababare Jurgen Klopp xaaladda dhaawaca ee daafaciisa Virgil van Dijk??